Ugu Wanaagsan Mashiinka Calaamadaynta Xabagta Qabow ee Qoyan ee ugu Wacan |Ipanda
Mashiinka calaamadaynta koollada qoyan wuxuu ku habboon yahay goobada alaabta wareegsan ee cuntada, xabagta, daawada, khamriga, saliidda, waxyaalaha la isku qurxiyo iyo warshadaha kale ee calaamadaynta dhalada wareegsan.
La qabso kontoroolka PLC: Adeegso nidaamka xakamaynta interface man-mashiinka PLC, kaas oo ay fududahay in la fahmo.
Usha Boostada ahi waxay qaadaa xabagta xabagta (koollada) marka qalabku socdo, ka dib calaamadaha lagu wareejiyo si ay ugu dhegaan sanduuqa calaamaduhu, wareega oo faakiyuum ku dheji suunka faakuumka ee dhalada.Calaamaddu waxay samaysay qurux badan, heer sare oo otomaatig ah, hawlgal fudud, dayactir ku habboon iyo dayactir.
Awood (BPM) 40-100
Dhexroor dhalada 30-110 mm
Khalad toosan ±1
Korontada 220V/380V 50HZ
Awoodda matoorka 1.0KW
Isticmaalka gaaska 4-6kgs/min
Xabag Xabagta phenolic ee biyaha ku milma
Miisaanka saafiga ah 450KG
Qaado xakamaynta PLC:Adeegso nidaamka xakamaynta interface man-mashiinka PLC, kaas oo ay fududahay in la fahmo.
Qaado Qaybaha Korontada ee Summada caanka ah
Isticmaalka summadda caanka ah ee caanka ah ee korantada, waxqabadka iyo xasiloonida
1. Mashiinka oo dhan waxaa sameeyay SS304 birta aan lahayn (oo ay ku jiraan Base Frame iyo engine sariirta) .Waxyaabaha gommures waa la xiran karaa, iyo walxaha baahida loo qabo in ay u hoggaansamaan shuruudaha amniga cuntada iyo caafimaadka beeraha kiimikada.
2. Ku dheji taangiga mashiinka birta-laabaashka ah ee birta ah daqiiqad kasta.
3. Rulalaha caagga ah ee gaarka ah iyada oo loo marayo tirada farsamaynta ayaa ah iska caabbinta qallafsanaanta iyo xirashada-iska caabinta.
4. Isticmaalka heerka vacuum, la shaqaynta suunka, calaamaduhu waxay ku dhejin karaan dhalada siman.
5. Dhalada tijaabada ah ee korontada ku shaqeysa si loo gaaro calaamad la'aan dhalada la'aan.
6. Iyada oo loo marayo beddelka soo noqnoqda, xawaaraha mootada waxaa loo hagaajin karaa si xor ah, awoodda calaamadeynta waxaa lagu xakameyn karaa si xor ah.
7. Ma aha oo kaliya hawlgal shakhsi ah oo sidoo kale waxay ku xidhi kartaa khadka wax soo saarka.
8. Waxay dhejin kartaa 360 standard, qaladkana waxaa lagu xakameyn karaa 1 mm gudahood
9. Waxay si dhakhso ah u hagaajin kartaa oo ay ula kulmi kartaa qeexitaannada kala duwan ee dhalooyinka iyada oo beddelaysa fanka Vacuum suunka qaybo yaryar, iwm. Oo waxay baabi'in kartaa qodobka hagaajinta aadanaha ee ugu fog.
10. Tiknoolajiyada farsamaynta mashiinka waa mid aad u fiican, qaybaha aasaasiga ah waa qaybo caadi ah si loo ilaaliyo si habboon.
11. Inta badan qaabeynta waa la soo dhoofiyaa, waxay hubin kartaa tayada, waxqabadka xasiloonidu waa ka sii fiican yahay, wakhtiga adeeggu waa dheer yahay, heerka dayactirka ayaa hooseeya.
Matoorada jaranjarada la soo dejiyey ee loo isticmaalo madaxa calaamadaynta si loo xaqiijiyo xawaaraha calaamadaynta iyo saxnaanta.
Korantada sawirka iyo nidaamka xakamaynta waxay khuseeyaan qayb horumarsan oo ka timid Jarmalka ama Japan ama Taiwan.
Roolaha gaarka ah waa daaweyn gaar ah, qallafsanaan iyo xirashada caabbinta.Xabag dhuuban oo isku mid ah, kaydi xabagta;
Isticmaal calaamadda dhejiska faakuumka, oo leh suunka, ayaa si siman loogu dhejin karaa dhalada
Hore: Mashiinka Buuxinta Biyaha Tooska ah 3 In1
Xiga: Mashiinka Calaamadaynta Laba-geesoodka ah ee Tooska ah
mashiinka buuxinta malab mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon Mashiinka Buuxinta Saliida Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah